WARARKA DHAQDHAQAAQA DAWLADDA KMG AH !
1)CABDALLA DEEROW OO BOOQDAY CIRAAQ! Dimishiq, 9th September 2002
Guddoomiyaha Baarlamaanka Dawladda KMG ah Cabdalla Deerow Isaaq iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa todobaadkii tagay booqday wadanka Ciraaq , iyagoo sida lagu soo waramay ka qaybgalay shirka Baarlamaanda Carabta oo lagu qabtay caasimadda Ciraaq ee Baqdaad . Waxaana lagu wadaa inuu Guddoomiye Cabdalla Deeroow iyo wefdigiisa booqasho todobaad ah ku yimaadaan dalka Imaaraadka Carabta dhowaan , iyagoo marti u ah Guddoomiyaha Golaha Shacabka Imaaraadka . Sida laga warqabo , Madaxaweynaha Dawladda kmg Cabdiqaasim Salaad iyo xukuumadii Ra’iisul Wasaairihii hore Cali Khaliif iyo waliba inta badan xubnaha Dawladda Xasan Abshirba waxay hore u booqdeen Imaaraadka .
2)XASAN ABSHIR OO JOOGA YEMAN! Sanca,9th September 2002
Raiisul Wasaaraha Dawladda KMG ah Xasan Abshir Faarax ayaa booqasho gaaban iminka ku jooga magaalada Sanca ee dalka Yeman . Wuxuuna wadahadallo la xirrira guud ahaan nabadeynta dalka soomaaliyeed la yeelanayaa mas’uuliyiinta dalkaas, gaar ahaana daryeelka ay u baahan tahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ballaaran ee ku nool dalka Yeman , oo beryahan danbe kala kulmayay maciishadooda dhibaatooyin culculus . Waxaana lagu wadaa inuu Xasan Abshir u soo dhaafo dabayaaqada todobaadkan magaalada Muqdisho .
3-YUUSUF DHEEG OO KA SOO NOQONAYA QAAHIRA!
Qaahira, 9th September 2002
( By Banadir.com)
Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Dawladda KMG ah Yuusuf Xasan Ibraahim ( Dheeg) ayaa maanta soo galay magaalada Dubai ee Imaaraadka , kadib markii uu Qaahira kaga soo qaybgalay shirkii aan caadiga ahayn ee Wasiirada Arrimaha Dibedda ee Jaamicadda Carabta ee la qabtay horaantii bishan September . Guddi ka kooban todoba (7) xubnood ayaa Jaamicadda Carabta u saartay arrinka Soomaaliya , iyagoo isla markaana isku waafaqay in la ayido qaranimada iyo midnimada Somalia . Waxay kaloo soo dhoweeyeen dadaalka Xukuumadda Kenya ugu jirto nabadeynta dalka Soomaaliya .
4)CULUSOOW OO KU SUGAN MANAAMA! Manama (Bahrain) 9th September 2002
Guddoomiyaha Bankiga Dhexe Mudane Maxamed M. Culusow ayaa ka qaybgalay shirka guddoomiyayaasha Bankiyada Dhexe ee wadama ku jira Jaamicadda Carabta oo lagu qabtay dorraad ( 7th September 2002 ) caasimadda Boqortooyada Baxreyn ee Manaama . Shirkaa oo sanadkiiba mar la qabto waxaa soo qaban qaabiyay qabashadiisa Sanduuqa Lacagta Carabta , waxaana sida la soo wariyay looga wadahadlay amuuro ku saabsan iskaashiga dhinacyada maaliyadda lyo lacagta ee dalalka xunaha ka ah Jaamacidda Carabta .